Home » Advice » Personal and community advice » Advice for new arrivals » Macluumaadka loogu talo galay bulshooyinka qowmiyadaha - Somali » Ka hortagga dembiyada - Crime prevention
Haddaad aragtay qof dembi gelaya ama sabab u ah shil waddo, waxaad booliiska ku caawin kartaa adigoo usheega siduu u egyahay qofkaasi. Tan oo kale waxaa loo yaqaan sifayn wanaagsan.
Markay gaari saaran yihiin carruurta 5 jir ka yar waa in lagu xidho kursi ammaan ah oo ku habboon da'dooda, cabbirkooda iyo culayskooda.
Seeragoyn - seeragudub (Trespassing)
Si looga baaqsado dhagar ama khayaamo lacageed, booliisku waxay talo ka bixiyaan lamacaamilka hay'adaha maaliyedda caanka ah ee la qaddariyo marka maalgelin lasamaynayo ama amaah laqaadanayo. Meel ammaan ah ku xafid kaadhka amaahda (credit card), kaadhka lacagta lagula baxo iyo lambarrada aqoonsiga (pin numbers). Cidna hasiin lambarradaas aqoonsiga. Marwalba weydii aqoonsi qofka doonaya inuu jeeg kuu qoro markuu wax kaa gato ama kusiinayo ijaarka adeeg aad u fulisay. Haddaad u aragto in qof ama shirkad maaliyadeed iskudayeyaan inay ku khayaameeyaan, la soo xiriir booliiska. Akhri macluumaad dheeraad oo ku saabsan Musuqmaasuqa Jeegagga iyo Kaadhadhka Amaahda (Credit Card).
Maxaa la yeeli...
Qalabka digniinta guryaha (alarm) ee kahortagga tuugada
Si aad Niyuusiilaan gaadhi u kaxayso, waa in aad ugu yaraan 15 jir tahay oo laysinka darawalnimada haysato.
Markay gaadhi saaran yihiin, carruurta da'doodu ka yar tahay 5 jir waa in lagu xidho kurisiga caruurta u gaarka ah (kursi ammaan ah) oo waafaqsan da'dooda, cabbirkooda iyo culayskooda.